Nosakanan'ny Taliban ny sidina rehetra avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Kabul
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Nosakanan'ny Taliban ny sidina rehetra avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ireo mpiady taliban dia miambina manoloana ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamid Karzai, any Kabul, Afghanistan,
Tonga eo akaikin'ny seranam-piaramanidina ny vondrona Taliban ary nitifitra fampitandremana maro hanaparitahana ireo olona nitangorona tao.
Nofoanan'ny Taliban daholo ny fiaingan'ny seranam-piaramanidina Kabul.
Niainga “niato vonjimaika” i Kabul International Airport.
Ny sidina rehetra dia nanolorana azy ireo tsy hisidina hamaky an'i Afghanistan.
Nanambara ny solontenan'ny Taliban androany fa “niato vetivety” ny fiaingan'ny sidina rehetra avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Kabul mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Araka ny tatitra avy any an-toerana dia tonga akaiky ny seranam-piaramanidina ny vondrona Taliban ary nitifitra fampitandremana maro hanaparitahana ireo olona nitangorona tao.
Talohan'izay dia nofoanana avokoa ny sidina ara-barotra rehetra avy amin'ny seranam-piaramanidina Kabul, raha toa kosa ny fiaramanidina mpandeha rehetra dia nanoro hevitra ny hiverina ary tsy hiditra an'i Afghanistan. Ny talata lasa teo dia nilaza ny sekretera vahiny britanika Dominic Raab fa nilamina ny raharaha teo amin'ny seranam-piaramanidina.
Tamin'ny 15 Aogositra, ny Taliban nifindra tany Kabul ary nametraka fifehezana feno ny tanàna ao anatin'ny ora maromaro. Nidina ny filoha Afgana Ashraf Ghani, araka ny nambarany mba hisorohana ny fandatsahan-dra ary nandositra ny firenena. Ny firenena tandrefana dia mamindra ireo teratany sy mpiasan'ny masoivoho.